Blaise Pascal: taariikh nololeedka, nolosha, waxyaalaha iyo shaqooyinka | Saadaasha Shabakadda
Maanta waxaan ka hadlaynaa mid ka mid ah ragga waqtigii ugu adkaa soo maray in loo aqoonsado inuu yahay mufakir caan ah dhammaan ragga taariikhda ku leh taariikhda. Ku saabsan yahay Blaise Pascal. Wuxuu ahaa aqoonyahan cilmiga xisaabta, fiisikiska, filosoofiga, cilmiga bayoolaji, akhlaaqiyaqaan iyo muran badan. In kasta oo aanu qofna weligii awood u lahayn inuu ka hadlo guulahiisa aqooneed ee weyn, haddana kharash badan baa ku baxay in loo aqoonsado inuu yahay mufakir caan ah. Wuxuu waxoogaa tabaruc ah kusoo kordhiyay sayniska iyo guud ahaan bulshada. Qaar badan oo ka mid ah weedhihiisa sida feker wanaagsan ayaa weli ku dhex jira bulshadeenna maanta.
Sidaa darteed, waxaan u hibeyn doonnaa qodobkaan si aan kuugu sheegno wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato taariikh nololeedka iyo waxyaabaha uu qabtay Blaise Pascal.
2 Awoodda Blaise Pascal
3 Falsafadeed iyo xilli diimeed
Horumarinta sayniska waxay ka dhigtay Blaise Pascal inuu caan ku noqdo xisaabiye ahaan, laakiin wuxuu qarinaayay fekerkiisa muddo dheer, fikradahaasna waxay ku lug leeyihiin dhammaan dhibaatooyinka suurtagalka ah. Nasiib wanaag, taariikhda ayaa awood u yeelatay inay soo kabato. Pascal wuxuu ahaa nin horudhac ah waqtigiisii, marka loo eego taariikhdiisa René Descartes, leexasho mugdi ah oo aan nidaam lahayn.
Blaise Pascal wuxuu ku dhashay Juun 19, 1623 magaalada Clermont Ferrand, France, wuxuuna ka tirsanaa qoyska hoose ee aristocratic-ka deegaanka. Marka laga soo tago Bryce iyo waalidkiis, qoysku wuxuu ka koobnaa walaashiis Gilbert (taariikh nololeedkiisii ​​ugu horreeyay) iyo kan ka yar Jacqueline, waxayna la yeesheen xiriir dhow. Gaar ahaan yaraantiisii, caafimaadka Pascal waxaa lagu gartaa daciifnimo jireed.
Kahor intuusan laba sano gaarin, wuxuu horeyba uqabtay cuduro sababa cudurada xiidmaha iyo murqo la’aanta, sanadihii lasoo dhaafayna waxaa kudhacday cuqdad layaableh (sida dulqaad la’aan dhanka musqusha ah ama inuu arko waalidkiis oo isku duuban), taas oo ku dhalisay weerarada neerfaha. Xaaladahaasi waxay umuuqdeen inay gadaal ka baxeen, laakiin madax xanuun, niyad jab iyo xanuun ayaa sii jiray oo saameyn ku yeelanaya noloshiisa iyo falsafadiisa.
Waxaa la siiyay waxbarasho taxaddar leh si uu u dareemo inuu ku guuleysan karo himilooyinkiisa oo dhan. Wuxuu helay akhrinta sheekooyinka Giriigga iyo Laatiinka iyo qoraalladii aadanaha aad u weyn, aabihiisna wuxuu calaamadeeyay kala-saar adag oo u dhexeeya su'aalaha sayniska iyo diinta.
Awoodda Blaise Pascal
Blaise Pascal wuxuu bilaabay inuu muujiyo astaamo muujinaya maskaxdiisa qaaska ah gaar ahaan xagga xisaabta. Markii uu jiray 11 sano oo keliya, wuxuu la kulmay soo-jeedin 32 oo ka timid buugga 'Elements' ee Euclid, kaasoo ina siinaya tusaale wanaagsan oo ku saabsan awooddiisa mala awaalka ah. Runtii wuxuu muujinayay awoodiisa tirooyin.
Laakiin shaqadiisu kuma koobna aragtida. Si loo caawiyo aabihiis, oo ahaa canshuur qaade una baahan xisaab badan, wuxuu sameeyay "mishiin xisaabeed" da'da 19: kalkuleytar. Suurtagalnimada khilaafkani wuxuu ku faafay si dhexdhexaad ah 1642 oo isla markiiba u muuqday.
1647, dhacdo taariikhi ah ayaa dhacday: Pascal iyo Descartes ayaa ugu dambayn kulmay. Markiiba way is necbaadeen. Shaqadiisa falsafadeed ee weyn "Mind", Pascal wuxuu ku tilmaamay aabaha "Ereyada Habka" sida "aan waxtar lahayn oo aan la hubin", halka Descartes uu u arko inuu shaqada Clermont Ferrand yahay "mid madhan madaxiisa." Qofna ma jiro ". Waqtigaas, jiritaanka faaruq wuxuu ahaa mid ka mid ah mowduucyada ugu kulul sayniska, badanaa maxaa yeelay waa la diiday inta badan: Sidee "wax" uga jiri karaan "waxba"?
Sannadkii 1648 Pascal wuxuu tijaabadiisa ku bilaabay ujeedo aad u cad: si loo muujiyo in waxa aan ugu yeerno "waxba" ay dhab ahaan "wax" yihiin, in ay tahay dhibaato xagga jirka ah, oo aan kaliya ahayn mid feker ahaan jirta. Caddayntu waxay ka timid buugiisa. Xidhiidhka ka dhexeeya tijaabada weyn ee isu dheelitirka dareerayaasha, isagoo sharxaya in cadaadiska hawadu uu sabab u yahay "argagaxa faaruqinta" walxaha, wuxuu ahaa mid ka mid ah awoodaha waqtigaas. Miisaankaaga iyo cadaadiska hawada. Pascal qudhiisu wuu ku faanay natiijooyinka wuxuuna ku qeexay shaqadiisa "tan ugu go'aanka badan ee lagu dhaqmi karo mawduucan."
Mid ka mid ah tabarucaadkii ugu weynaa ee xisaabta ee Blaise Pascal wuxuu ahaa xisaabinta ixtimaallada.
Falsafadeed iyo xilli diimeed
Waqtigaas waxaa bilaabmay marxaladii labaad ee nolosha Pascal, isaga oo ka tagay xisaabta iyo sayniska, una hibeeyay tamar badan falsafada. Wuu iska dhaafay cilmi baaristiisa, wuxuu aad u daneynayay fiqiga, wuxuuna qoray shaqooyin fara badan oo hordhac ah Pascal wuxuu ku mashquulsan yahay adeegsiga diinta iyo aaminsanaanta inuu yahay aaladda aasaasiga ah ee fikradaha laga helo qoto dheerida nafta.
Waxay ahayd waqtigan uu bilaabay inuu ururiyo dukumiintiyo uu kaga dhex muuqanayay aragtidiisa. Shaqadu weligeed ma dhammaan ama lama daabicin, waxaa lagu soo daabici lahaa cinwaanka "Fikradaha" waqtiga dhimashadiisa, iyo waa shaqada falsafadeed ee ugu muhiimsan ee uu haysto.
Qiyaastii 1656 Jansenist-kii Antonie Arnaud, oo lagu eedeeyay inuu Calvinist yahay, ayaa u soo gurmaday saaxiibkiis. Waxaan u qori lahaa waxa loo yaqaan Waraaqaha gobolka, oo aakhirka noqon lahaa mid ka mid ah shaqooyinka ugu sarreeya ee suugaanta Faransiiska. Waraaqaha ayaa dareen weyn ku abuuray Faransiiska maxaa yeelay waxay ahayd markii ugu horreysay ee diinta iyo falsafadda laga saaro maktabadaha iyo fasallada oo dadka loogu soo bandhigo afkooda fudud. Pascal wuxuu indhaha bulshada ku soo jeedinayaa su'aalaha ahmiyadda aqooneed.
Blaise Pascal wuxuu matalaa mufakiriin si dhammaystiran isugu daraya iimaanka sayniska, mala awaalka iyo tijaabinta adag. Dareenkiisu wuxuu ku wajahan yahay dhammaan dhinacyada aqoonta: xisaabta, fiqiga, falsafadda, iwm. Xogta oo dhami isaga ayay waxtar u lahayd.
Si ka duwan dadka kale ee aqoonta aadanaha oo dhan salka ku haya, ma uusan dooneynin inuu ka tago qeybta qiiro leh, difaaca cilmigana waa inuu noqdaa mid isku dhafan oo caqli gal ah. Sidii Schopenhauer markii dambe, wuxuu bulshada ku eedeeyay in sida muuqata aysan fahmin runta ku saabsan hoos u dhaca akhlaaqda, taasna ay ka dhigayso mid iyada masuul ka ah. Sidaa darteed, waa inaan xusuusannaa isaga oo u dhignaa boos sharaf leh. Dhaleeceyntiisa / amaanshihiisa Friedrich Nietzsche wuxuu ku maamuusay isaga: «Pascal, oo aan jeclahay, ayaa i baray waxyaabo aan dhammaad lahayn. Masiixiyiinta kaliya ee macquul ah taariikhda ”.
Waxaan rajeynayaa in xogtaan aad waxbadan kaga baran karto taariikhda iyo taariikh nololeedka Blaise Pascal
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Kala bixid » Blaise Pascal
Quasar: astaamaha iyo sifooyinka
Waa maxay baraf sideese loo sameeyaa